Nala soo xiriir | Achieve | Xarunta Hormarinta Xirfada MN
Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Shaqada
Hay’adaha Maalgeliyaha PD
HAGAHA MIHNADA SHAQO EE ONLAYNKA AH
KOOXDAADA GUUL GAADHIDA
SU’AALAHA INTA BADAN LA IS WAYDIIYO
Ma noo haysaa Su’aal ku saabsan?
Xubnaha shaqaalaha waxaa ka go’an inay bixiyaan adeega macaamiisha ee tayada sareereyo iyo taageero wax ku ool ah. Haddii aad qabtid su’aalo ama walaac, fadlan nagala soo xiriir dhinaca taleefonka ama i-meelka.
Waad ku dhaafi kartaa marwalba fariin ee ka baxsan waqtiyadaan.
Xarunta Achieve MNee Hormarinta Xirfada
Achieve Individual, RBPD, and Trainer Membership Applications
Trainer membership/renewal approvals
Jaheynta Ansixinta Koorsada
For application and approval support, contact Achieve at:
Taleefon Bilaash ah: (855) 378-3131
Fakis Bilaash ah: (877) 379-2467
The Develop Helpdesk at Achieve supports:
Develop Login information
Technical assistance for submitting applications, courses, and events
For Develop account and technical support, contact the Develop Helpdesk at:
Taleefon Bilaash ah: (833) 605-6938
2908 Marketplace Drive, Suite 103
Wixii dooqyada adeega luuqada ee lagu heli karo Hmong, Soomaali, iyo Isbaanish, soo wac:
Aaga Magaalooyinka Mataanayaasha: (651) 665-0150
Taleefon Bilaash ah: (888) 291-9811
Warbixintaan waxaa lagu heli karaa qaabab kale ee shaqsiyada qaba curyaannimada adiga oo soo wacayo:
TTY: (608) 709-1096
Soo dir fariin degdega ah:
Develop ID# (required)
Individual Membership Trainer Approval Course Approval Other
La kulan Shaqaalaha
Isku-Duwaha Xaqiijinta Macluumaadka
Hyewon wuxuu u keenay waya aragnimo labo iyo toban sanno ee goobta waxbarashada ee Achieve. Horey u soo ahaa qabanqaabiye kooxeed, maamule kuxigeen ee akadeemiyadda Montessori, iyo macalinka ESL ee Chile iyo Spain, waxay la wadaagaysaa aqoonteeda asalka ah ee xoogga leh adiga oo ah Isku-duwaha Xaqiijinta Macluumaadka. Waxay mas’uul ka tahay hubinta habka iyo dhammaystirka codsiyada xubinimada shakhsiga ah ee ku saleysan siyaasadaha iyo habraacyada. Intaa waxaa sii dheer, Hyewon waxay bixisaa taageerada ogolaanshaha tababarka si toos ah iyo falanqaynta shahaadooyinka.
Taqasuska Hogaanka Xaqiijinta Xogta
Is-sharaxida si sareyso loo diyaariyay iyo qofka ujanjeero sharaxaada, Julia wuxuu ku wanaaagsanyahay gelida degdega ah iyo saxan iyo xogta xaqiijinta. Wuxuu bilaabay ka shaqeynta Achieve ee Agoosto 2016, sida Taqasuska Xaqiijinta Xogta oo waxaa sare loogu qaaday inay Hogaamiso Xogta Xaqiijinta ee Abriil 2017. Waaya aragnimadeeda ee la shaqeynta macaamiisha sida xiriiriyahah dhacdada iyo ka shaqeynta tafaariiqda ay ku dhiiorgeliso inay ku siiso taageero cajiib ah Achieve. Oo ay la jirto xamaasada, Julia waxay dhahday: “Waxaa sharaf ii ah hubinta in boggaga macaamiisheena’ ay cusubyihiin oo saxanyihiin, oo ay ku caawineyso inta lagu jiro.”
Taqasuska Wacyigelinta iyo Ka qeybgalinta Bulshada
Julie wuxuu ku biiray Achieve bishii July 2016 isagoo ah “Takhasuusle Wacyigelinta Bulshada iyo Hawlaha”. Wuxuu Diirada saaray maareynta xiriirka istiraatiijiga ah isagoo hubinayo helitaanka adeegyadayada. Iyada oo leh in ka badan toban sanno waaya aragnimada ee xiriirada bulshada iyo wacyigelinta bulshada, Julie way ka mahadcelisaa wadaagida warbixinta ee ku saabsan muhiimada shaqada aan sameyno. Waalid ahaan, Julie way qiimeysaa macmiiladeena oo ku faantaa caawinta ku xiritaanka shaqaalaha Daryeelka Carruurta iyo Waxbarashada MN illo caawin leh iyo qalabyada loogu baahanyahay in lagu gaaro hadafyadooda xirfada.
Kuxigeenka Takhasuuslaha Farsamada Develop
Lynne waxay kusoo biirtay Achieve bishii May 2017 iyada sida KuxigeenkaTakhasuslaha Farsamada Develop. Lynne waxay leedahay asal xoogan oo adeegga macaamiisha ah waxayna isticmaashaa waayo-aragnimadooda si ay u taageerto macaamiisha horumarinta su’aalaha la xiriira. Waxay haysataa shahaadada bachelorka ee waxbarashada hore ee caruurta waxayna leedahay waayo-aragnimo ahaan macalinka xaruurnimada hore. In ka badan 17 sano oo ay ahayd Qareenka Qoyska ee Hay’adda Head Start/Early Head Start, Lynne wuxuu qiimeeyaa shaqada ay macaamiisheenu sameeyaan oo ay ku faanaan bixinta adeegyo macaamiisha aad ugu fiican.
Taqasuska Taageerada Xirfadlaha
Nicky wuxuu usoo wareegay Achieve bishii Oktoobar 2016 isagoo kamid ahaa Registry, Inc., Nidaamka Aqoonsiga Wisconsin ee Daryeelka Carruurnimada iyo xirfada Waxbarashada, sida Madaxa Takhasuska Xaqiijinta Macluumaadka ahaan waxaa loo dalacsiiyay Takhasuslaha Taageerada Xirfadda bisha Juun 2017. Waxay xaadir ka aheyd daryeelka carruurta iyo goobta waxbarashada oo kow iyo toban sanno jir ah sida hogaanka macalinka ee kooxda daryeelka carruurta. Nicky waxay haysataa digsiiga la xiriiro carruurnimada hore iyo hadeer waxay ku jirtaa shaqada iyada oo dhameystireyso digriigeeda bajalarka ee waxbarashada deegsiga/shaqada bulshada. Nicky waxay siisaa adeega macaamiisha macmiilada oo dhinaca taleefonka iyo i-meelka oo ansixisaa Taqasuska RBPD.
Takhasusaha Xog Uruuriska
Ka hor inta uusan ku biirin Achieve Juun 2017, Sawe wuxuu ahaa macallin hoggaamiye ah oo macallin ah muddo afar sano ah. Takhasuslaha Diiwaangelinta Waraaqaha Dukumentiyada, Sawe waxay qabanaysaa dhammaan dokumentiyada imaanaya. Sawe waxay hubisaa in codsiga macaamiisha si dhakhso oo sax ah loogu shaqeeyo. Iyadoo leh in ka badan toddobo sano oo waayo-aragnimo adeegga macaamiisha ah, waxay ku raaxeeystaan la macaamiilka xubnaha telefoon iyo iimayl ahaan.
Takhasuska Xaqiijinta Xogta
Sheemika waxay ku soo biirtay Achieve bisha Luuliyo sanadka 2016 sida Takhasuska Qaadashada ee ku helayo waraaqaha dhinaca i-meelka iyo fakiska. Sanadka 2017, Sheemika waxay noqotay Takhasuska Xaqiijinta Xogta, halka ay ka baarandagto oo ay gashaa codsiyada xubinnimada shaqsiga oo ay siisaa adeega macmiisha. Sida bixiyaha daryeelka carruurta hore, Sheemika way fahamsantahay nidaamka daryeelka carruurta iyo dhaqaatiirta waxbarashada inay maraan dhinaca inay cusub yihiin baarista hadeer, dhaqamada ugu wanaagsan iyo shuruudaha kale si markaas loo gaaro hadafyadooda. Waxay ku faantaa kartideeda oo ay ku taageereyso guusha dadka kale ee daryeelka carruurta iyo goobta waxbarashada.
Xiriiriyaha Hormarinta Xirfada
Achieve waxay kooxda kusoo dhaweeysay Tara Febraayo 2014. Inta lgu jiray muddadeeda sida Takhasuska Xaqiijiyaha Xogta waxay muujisay xirfadaha hay’ada gaarka ah iyo adeeg macaamiisha. Gudaha 2016, waxay qabatay door cusub sida Taqasuska Hormarinta Xirfada iyo gudaha 2017, waxay qaaday doorka Xiriiriyahah Hormarinta Xirfada. Tara waxay siisaa taageerada shakhsiga la gaareeyay tababarayaasha iyo dhaqaatiirta. Waxay sharaftaa inay si taxadar ah u eegto mashaariicda koorsada ku jirto si ay u hubiso helitaanka tayada waxbarashada iyo fursadaha hormarinta ee dhaqaatiirta. Ka hor intii aaney ku biirin Achieve, waxay ahayd adeeg bixiye caruurnimada hore iyo waxbarasho. Balanqaadkeeda ee ku daryeelida carruurta danaha ugu wanaagsan ee ay la jirto xitiraamkeeda shaqaalaha ECE, waxay ku jaheysaa wadadeeda ee taageerida macmiishaada iyo hadafyadooda guusha.
Agaasimaha Maamulida Xirfada iyo Hubinta Tayada
Get the latest and greatest from our daily feed.